Anisan’ny nandray anjara mavitrika tamin’izany ny banky BNI Madagascar izay niezaka nampahafantatra ny fandraisany anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena. Efa manana masoivoho am-polony rahateo izy any amin’iny Faritra Atsinanana iny miampy ny guichets automatiques. Anisan’ny mampiroborobo ny toekarena any an-toerana rahateo izany sady mamaly ny filan’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro. Anisan’ny nampiavaka ity banky ity tamin’ireo tranoheva hafa moa ny fahafahany nihaona mivantana tamin’ny mpamokatra sy ny mpivarotra ary ny olon-tsotra. Teo ihany koa ny fampahafantarany ireo karazana tolotra mifanaraka amin’ny fivoaran’ny toetrandro izay fantatra fa tena mahaliana olona marobe tokoa amin’izao fotoana izao.